एजेन्सी : हिउँदको मौसम सुरु हुनासाथ सडकमा बदाम देखिन थाल्छन् । तर के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि जाडो मौसम र बदामबीच के सम्बन्ध छ ? चिसो लाग्नेबित्तिकै बजारमा किन आउन थाल्छ बदाम ?
वास्तवमा बदाममा पौष्टिक तत्वहरूले भरपुर हुन्छ र यसलाई खाँदा स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यसमा प्रोटिनमा भरपूर हुनुका साथै राम्रो फ्याट, माइक्रो र म्याक्रो न्यूट्रिएन्ट पनि पाइन्छ, जसले धेरै रो’गबाट बचाउँछ। साथै, बदाम काजू र ओखर जत्तिकै महँगो हुँदैन। बदाम उमालेर वा भुटेर खान सकिन्छ ।
जाडोमा बदाम खानुका ५ फाइदाहरु– वजन कम गर्नः यदि तपाइँ तौल घटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, बदामले तपाइँलाई यो काममा मद्दत गर्न सक्छ। बदामले भोक कम गर्ने काम गर्छ, तर यसलाई धेरै खानु हुँदैन। प्रोटिनः १०० ग्राम बदाममा २५.८ ग्राम प्रोटिन हुन्छ ।
यो बिरुवामा आधारित प्रोटीनको राम्रो स्रोत हो, त्यसैले जाडोमा धेरै फाइदाजनक हुन्छ। मुटुलाई स्वस्थ राख्छः यी क्रन्ची स्न्याक्सहरूले तपाईंलाई हृदय रो’गको जोखिम बढाउने धेरै कारकहरू व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यसले ख’राब को’लेस्ट्रोल कम गर्न पनि काम गर्छ।
र’क्त सुगरलाई नियन्त्रणः बदामलाई म’धुमेहको आहारमा थोरै मात्रामा पनि समावेश गर्न सकिन्छ। खनिज र भिटामिनः बदामले एकैपटक धेरै पोषक तत्व प्रदान गर्छ। बदाम खनिज, भिटामिन, प्रोटिन, ओमेगा–घ, ओ’मेगा–ट, फाइबर, कपर, फोलेट, भिटामिन–ई, थायामिन, फस्फोरस र म्या’ग्नेसियमको उत्कृष्ट स्रोत पनि हो ।
२०७८ पुष ४, आईतवार १९:१३ गते0Minutes 561 Views